Ii-Crypto Signals zaMaqela zeTelegram zasimahla 🥇 Nge-5 kaJanuwari 2022
Indawo yokurhweba nge-cryptocurrency ngoku yindawo yokulwa yeebhiliyoni ezigidi. Ayibandakanyi nje kuphela ukuba imali edumileyo yedijithali enje ngeBitcoin, i-Ethereum, kunye neRipple- kodwa iimfumba zezinto ezingenamanzi ezingaphantsi, nazo.
Nangona kunjalo-kwaye kuninzi njengaye yorhwebo ntengiso inkundla, ukuthenga nokuthengisa ii-cryptocurrencies ngombono wokwenza imali akukho lula. Ngokuchasene noko, kufuneka ube nokuqonda okunzulu kakhulu kohlalutyo lobuchwephesha.
Iindaba ezimnandi zezokuba kukho enye indlela yokufuna ukuchitha iinyanga neenyanga ukufunda indlela yokufunda iitshathi zemali yedijithali -Iimpawu zeTelegram ye-crypto. Ukubeka ngokulula, ngokujoyina inkonzo eneempawu ezikumgangatho ophezulu ezifana nokuFunda u-2 woRhwebo- uyakufumana iingcebiso zorhwebo nge-cryptocurrency ngqo kusetyenziswa i-Telegram.
Ngaba unomdla wokufumana okungakumbi malunga nendlela imiqondiso yeTelegram ye-crypto enokukuvumela ngayo ukuba uhlale phambi kwegophe kule ndawo intsha yorhwebo? Ukuba kunjalo - esi sikhokelo siza kuchaza yonke into oyifunayo malunga nokufunda ngeenkonzo zetayitile ye-2 yezoRhwebo!
Yintoni imiqondiso yeTelegram ye-Crypto?
Ngaphambi kokuba sifike kwi-nitty-gritty, kufuneka kuqala sichaze ukuba yeyiphi na imiqondiso ye-cryptocurrency. Kwindlela yayo esisiseko, imiqondiso ziingcebiso zorhwebo ezithunyelwa kuwe ngexesha-lokwenyani.
Oku kunokuza ngomyalezo weSMS, i-imeyile, okanye usetyenziso lomyalezo okhawulezileyo njengeTelegram. Isiginali ngokwayo iya kuba nothotho lwemiyalelo ekuvumela ukuba uzuze kuphando lobuchwephesha beengcali.
Umzekelo, umqondiso unokukuxelela ukuba uthenge i-BTC / USD nge-14,500 yeedola kuba isibonisi se-RSI sibonisa ukuba isibini eso sigqithile.
Kwangokunjalo, umqondiso unokukuxelela ukuba uthengise ngokufutshane i-ETH / i-EUR kuba ulungelelwaniso lwenkxaso ephambili sele lwaphulwe.
Ukongeza kwisibini kunye nexabiso lokungena, eyona miqondiso yeTelegram ye-cryptocurrency iya kukuxelela ukuba yeyiphi na ilahleko yokuyeka kunye nokuthatha inzuzo yokuseka. Ukubeka ngokulula, oku kuqinisekisa ukuba ungarhweba ngeemali ze-crypto ngelixa kwangaxeshanye uthomalalisa umngcipheko wakho.
Ngoobani abaFanelekileyo beMpawu zeTelegram ze-Crypto?
Iimpawu zeTelegram ze-crypto zilungele iinjongo ezahlukeneyo zezemali kunye neeprofayili zamava. Ngamanye amagama, nokuba uyimali entsha ye-cryptocurrency orbie otyalomali onamaxesha ambalwa ezandleni zakho - imiqondiso inokuba sisisombululo osifunayo.
Awunawo umbono wokuba ungathengisa njani i-Crypto
Ayithandeki into yokuba imiqondiso yeTelegram ye-crypto ikulungele kakhulu ukurhweba ngenkuthalo, ngaphandle kwamava. Kungenxa yokuba awudingi ukwenza naluphi na uphando okanye uhlalutyo. Ngokuchasene noko, inkonzo yesiginali yerejithali yerejithali iya kukunika onke amaxabiso okungena kunye nokuphuma ekufuneka uwabeke kumthengisi omkhethileyo.
Oku kubaluleke kakhulu, njengokukwazi ukumisela ukuba leliphi icala elinokuthi lihambe ngexabiso lemali yedatha kwi-cookie yexeshana ekunzima ukuyiqhekeza. Emva kwayo yonke loo nto, ukufunda ukungena nokuphuma kohlalutyo lobuchwephesha, izixhobo zokuzoba, kunye neendlela zentengiso kunokuthatha iminyaka ukuyazi. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabathengisi be-newbie cryptocurrency bahlala besilela ukuthatha indawo.
Awunalo ixesha lokuphanda ngokuSebenzayo kwi-Crypto Trends
Ukuqhubela phambili ukusuka kwicandelo elingentla, imiqondiso yeTelegram ye-crypto ikwalungele kwabo baswele ixesha lokurhweba. Ngokuqinisekileyo, kuya kufuneka ubeke indawo yokuthenga kunye nokuthengisa iiodolo eziyalelwa ukuba imiqondiso uyenze. Kodwa, uya kuba nakho ukusika iiyure zophando lwemihla ngemihla ezifunekayo ukuze uphumelele kwindawo yentengiso ye-crypto.
Kungenxa yokuba inkqubo yophando kunye nohlalutyo ithathelwa ingqalelo ngumboneleli wakho wesiginali we-Telegraph crypto okhethiweyo. Umzekelo, thina kwi-Learn 2 Trade sineqela labarhwebi abanamava ngaphakathi ezindlini abenza uhlalutyo lobuchwephesha kwiveki yonke. Ngokukhawuleza xa sifumana ithuba lokuthengisa, ilungu leqela liya kuhlaziya amalungu ethu omqondiso nge-app yeTelegram.
Ufuna ukwahlulahlula kwiimarike zoRhwebo ezininzi
Masicinge ukuba ungumrhwebi oyingcali onerekhodi enkulu yokwenza impumelelo engaguqukiyo. Ukuba kunjalo, uya kuqala ukwazi ukuba zininzi kakhulu iiasethi zemali onokuthi ugxile kuzo.
Umzekelo, unokuyazi i-ins kunye nokuphuma kwenani elikhethiweyo lezibini ze-imali yedatha- kodwa awunakuba nakho ukuba yingcali kuzo zonke.
Ngale nto engqondweni, imiqondiso yeTelegram ye-crypto ikuvumela ukuba uguqulule kwiimarike ezahlukeneyo. Kwakhona, oku kungenxa yokuba uhambo lophando aluyonto ekufuneka ukhathazekile ngayo.
Endaweni yoko, umboneleli wakho owukhethileyo uya kuba nezakhono, amava kunye noncedo lwetekhnoloji ukuskena iimfumba zeempahla kunye nezixhobo zemali.
Umzekelo, ayisiyiyo kuphela ukuba urhwebo lokuFunda 2 lubenamava abathengisi bendlu abaziingcali kwii-cryptocurrensets- kodwa nezinye iiasethi. Oku kubandakanya i-forex, isitokhwe, ii-indices, kunye nezinto ezinje nge igolide kwaye ioyile.
Ufuna ukufikelela kuLuntu lokuThengisa i-Cryptocurrency
Izibonelelo zokuba yinxalenye yoluntu olurhweba ngokuthengisa ngokupheleleyo lwe-crypto akufuneki zijongelwe phantsi. Kungenxa yokuba uya kuba nokufikelela kubantu abathanda izinto bonke abanqwenela ukufezekisa injongo enye-yokwenza imali kwiimarike zeebhiliyoni zeedigital cryptocurrency.
Xa usebenzisa i-Telegram ye-crypto signal service njenge-Learn 2 Trade, uya kuba nokufikelela kumalungu angama-5,000 XNUMX. Ngelixa abanye bengenamava (mhlawumbi njengawe), abanye baya kuba neminyaka yamava kwisithuba. Oku kuyenza, ewe, kubandakanya iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini.
Ngokuba yinxalenye yoluntu lwethu lokurhweba nge-crypto, uya kuba nakho ukufumana ulwazi lwentengiso kwamanye amalungu, ukwazi ukubuza imibuzo, okanye uhlale phantsi ulinde umqondiso olandelayo oza kufika!
Isebenza njani imiqondiso yeTelegram ye-Crypto?
Ke ngoku ekubeni sichazile ukuba ngubani umqondiso weTelegram ye-crypto onokulungela, ngoku kufuneka sityhale nzulu kancinci kwindlela le ndawo yentengiso isebenza ngayo.
Emva kwayo yonke loo nto, uza kubeka emngciphekweni urhwebo lwakho xa usenza umqondiso, ke kubalulekile ukuba uqonde ukuba izinto zisebenza njani ngaphambi kokuba ungene.
Zonke iinkcukacha zoMyalelo woRhwebo zinikezelwe
Xa ufumana umqondiso ovela kuRhwebo 2 loRhwebo, uya kufumana yonke into oyifunayo. Oko kukuthi, asipheleli nje ekuboniseni iperi ye-imali yedatha kunye nexabiso lokungena. Ngokuchasene noko, uya kubonelelwa ngexabiso elifunekayo lokuphuma kunye nenqanaba lokuyeka.
Nanku umzekelo wento enokubonakala ngathi uphawu lwe-Learn 2 Trade Telegraph crypto:
Matanisa: XRP / USD
Umda weMida: $0.2890
Thatha Inzuzo: $0.2689
Ukuphulukana nokupheliswa: $0.2970
Umngcipheko okhuthaziweyo: 1%
Njengoko ubona koku kungasentla, kukho iziqwenga zedatha ezi-XNUMX oza kuhlala uzifumana kwiimpawu zethu zeTelegram ye-crypto. Ngaphambili koku sisibini semali yedijithali ekufuneka uyithengisile nokuba ngaba ukhetha ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo.
Ewe kunjalo-oku kubandakanya nexabiso lokungena elifunekayo. Kule meko, loo nto ngumyalelo wokuthenga umda kwi-XRP / USD kwi- $ 0.2890. Into onokuyifumana kuninzi lwababoneleli beempawu ze-crypto kwisithuba kukuba yiyo yonke into oyakuyifumana. Ngamanye amagama, ngelixa unesiphakamiso sokurhweba kunye nexabiso lokungena elinconywayo-kuya kufuneka uze nesicwangciso sakho sokuphuma.
Oku kuyaphikisana nohlobo lwenkonzo ye-Telegram ye-crypto ekufuneka ijongeka ngayo, yiyo loo nto sihlala sinikezela ngexabiso lokuyeka kunye nengeniso kunye nazo zonke iingcebiso zethu.
Njengoko ubona kumzekelo ongentla, sicebisa ukuba ixabiso lokulahleka liyeke kwi- $ 0.2970.
Ukuba urhwebo emva koko luye ngokuchasene nathi kwaye i-XRP / USD yabetha i-0.2970- isikhundla sasiza kuvalwa ngokuzenzekelayo.
Oku kuqinisekisa ukuba sigcina amanqanaba ethu omngcipheko ubuncinci.
Ukongeza, sikhethe ixabiso lokwenza inzuzo eyi- $ 0.2689.
Njengomyalelo okhankanyiweyo wokulahleka kokuyeka, ukuba eli xabiso lifikelelwe kwimarike emva koko urhwebo lwethu luya kuvalwa ngokuzenzekelayo.
Ngeli xesha kuphela, kwixabiso lethu ekujoliswe kulo. Njengoko sityhila ngakumbi kungekudala, imiqondiso yethu ye-Telegraph crypto ihlala inomngcipheko kunye nomvuzo. Umzekelo, sinokubeka umngcipheko kwi-1% ukwenza iipesenti ezi-4, okanye sibeke umngcipheko kwi-2% ukwenza i-5% yenzuzo. Nokuba yeyiphi na indlela, oku kuya kubonakala kumanqanaba okuphulukana nokuyeka kunye nengeniso eza kunye nomqondiso weTelegram ye-crypto.
Sigqwesa njani kwiNtengiso ye-Cryptocurrency Market
Usenokuba uyazibuza ukuba njani ngokoqobo sithola imiqondiso yethu ye-Telegraph crypto. Emva kwayo yonke loo nto, konke kulungile kwaye ukuthumela iziphakamiso zorhwebo- nabani na angakwenza oko. Kodwa, thina kuFunda 2 urhwebo ngokwembali sikhusele umyinge we-76% yokuphumelela- oko kuthetha ukuba ekuhambeni kwexesha sivelisa imisebenzi ephumeleleyo kunalahleko.
Ukubeka ngokulula, imiqondiso yethu yeTelegram ye-crypto yenziwa ngasemva kuphando olunzulu liqela lethu labathengisi bendlu. Ubuninzi beli lilawulwa luhlalutyo lobuchwephesha, nangona kunjalo, iqela lethu likwagcina iithebhu kwizinto ezisisiseko.
Njengoko besitshilo ngaphambilana, uhambo lophando lobuchwephesha alukho lula kwi-master. Umzekelo, abathengisi bethu abanamava baya kusebenzisa uninzi lwezalathi zobugcisa ngalo lonke usuku lokuthengisa. Baye basebenzise izikrini ezininzi ukuqinisekisa ukuba bahlala benombono opheleleyo wentaka ngemeko yangoku yeemarike ze-crypto.
Ukongeza, ayisiyiyo eyokufumana imikhwa. Kungenxa yokuba iqela lethu labarhwebi lisebenza nzima ukuze lifumane awona maxabiso aphezulu angena kunye nokuphuma. Ekugqibeleni, oku kuqinisekisa ukuba sinciphisa iilahleko zethu kwimeko apho umqondiso we-crypto ungayi kucwangcisa. Oku kubalulekile, kuba ayizizo zonke iimpawu zethu eziya kubuyisa inzuzo. Nawuphi na umboneleli okuxelela ngokwahlukileyo kukungathembeki.
Kutheni iTelegram isetyenziselwa iiMpawu zeCrypto?
Imiqondiso yokurhweba sele ijikeleze amashumi eminyaka-ixesha elide ngaphambi kwexesha lamaqonga okurhweba kwi-Intanethi. Emva phayaa, imiqondiso yayinikezelwa ngohlobo lomnxeba. Njengoko unokuthelekelela, le yayingeyonto inzima kwaye ibiza kakhulu. Emva koko ababoneleli beempawu benza utshintsho kwi-imeyile kanye yorhwebo ntengiso yaba yinto.
Ngelixa oku kusasetyenziswayo ngamaqonga amaninzi e-crypto namhlanje, isengasebenzi kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, kukho lonke ithuba lokuba ungayiboni i-imeyile ngexesha lokwenza uphawu kwaye ngenxa yoko uliphose ithuba. Kungenxa yoko le nto i-Learn 2 Trade crypto service isebenzisa iTelegram.
Ngokukhawuleza xa omnye wabathengisi bethu basendlini ethumela umqondiso, uya kuthumela isaziso kwi-app yakho yeTelegram. Ngethuba nje unezaziso ezivulekileyo, awusoze waphoswa ngumqondiso. Ukongeza koku, iTelegram iyasivumela ukuba sinxibelelane ngakumbi neempawu zethu.
Umzekelo, sihlala sithumela imifanekiso yeziphumo zethu zohlalutyo lobuchwephesha ukuze amalungu ethu ajonge inkqubo yethu yokucinga. Kwaye ke-njengoko besesitshilo ngaphambili, iTelegram ibalasele ekudaleni indawo yokurhweba. Konke okufuneka ukwenze kukujoyina iqela lethu kwaye uya kuba nethuba lokuxoxa malunga nokuqonda kweemarike phantse nama-5,000 amaqabane afunda amalungu oRhwebo ama-2.
Sukuyenza impazamo ngayo - zonke iindlela zokurhweba ziza nomngcipheko. Nokuba uthenga izabelo zamashishini ngokwesiko, ukuthenga iibhondi, okanye ukurhweba ngababini be-forex - kukho onke amathuba okuba ulahlekelwe yimali. Oku kwahlukile ekuthengeni nasekuthengiseni ii-cryptocurrensets- njengoko intshukumo engeyiyo yentengiso iya kukhokelela kwilahleko.
Njengoko besitshilo ngaphambilana, asisoloko siyifumana ngokuchanekileyo. Kodwa, ekuhambeni kwexesha, iipesenti ezingama-76 zokuphumelela ziye zalusebenza kakuhle uphawu lwethu. Ngale nto ithethwayo, ukuba nentengiselwano ephumelele ngakumbi kunalahleko akuyi kukuqinisekisa ukuba uya kufumana inzuzo yexesha elide. Kungenxa yokuba usadinga ukuba nesicwangciso esiliqili sokulawula umngcipheko endaweni.
Apha ngezantsi sigubungela iziseko zendlela onokuzisebenzisa ngayo imiqondiso yeTelegram ye-crypto ngendlela enobungozi.
Ulawulo lwebhanki yethiyori esetyenziswe kuwo onke amacandelo orhwebo. Ibhekisa nje kwinkqubo yokukhusela imali yakho yorhwebo kwilahleko enkulu. Eyona ndlela isebenzayo nesetyenziswa ngokubanzi yokwenza oku kukunciphisa isixa osibekayo kwindawo. Oku kuphunyezwe ngcono ngokwemiqathango yepesenti - xa kuthelekiswa nemali ekhoyo kwi-akhawunti yakho.
Umzekelo, masicinge ukuba uthatha isigqibo sokufaka izibonda zakho kwi-1.5%.
Ukuba ikomkhulu lakho lokurhweba ngoku limi kwi- $ 4,000- oku kuthetha ukuba awungekhe ubeke umngcipheko ngaphezulu kwe- $ 60 kurhwebo olunye.
Kodwa ke kunjalo - ixabiso lentengiso yakho iya kunyuka isenyuka kwindawo nganye oyivalayo.
Umzekelo, ukuphela kwenyanga yoku-1, usenokuba uyonyusile imali oyirhweba kwi- $ 5,000.
Kananjalo, isibonda sakho esiphezulu ngoku simi kwi- $ 75.
Kungenxa yokuba umda we-1.5% ngoku usekwe kwi-5,000 yeedola, ngokuchasene ne-4,000 yeedola oqale ngayo.
Xa uthatha le ndlela, akunakulindeleka ukuba uyitshise imali yakho yorhwebo. Nokuba uqhuba ngokungalunganga kweziphumo, ubukhulu bobukhulu bezorhwebo buya kuncipha njengoko ibhalansi yakho yehla.
Umzekelo, masithi unenyanga yesibini eyoyikekayo yokuthengisa.
Kwelinye icala, ibhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo ngoku ime kwi- $ 3,200 nje
Oku kuthetha ukuba uyi- $ 800 ezantsi ukusuka kwityala lakho lokuqala le- $ 4,000
Kodwa, ngokusekwe kwisibonda esiphezulu se-1.5%, eyona nto unokubeka umngcipheko kwi-3,200 yeebhalansi yi- $ 48
Njengoko ubona, oku kungaphantsi kweedola ezingama-75 owawukwazi ukubeka umngcipheko kwinyanga ephelileyo xa ibhalansi yakho yema kwi-5,000 yeedola
Ekugqibeleni, ngokusebenzisa isicwangciso-qhinga solawulo lomngcipheko ngokudibeneyo neempawu zethu zeTelegram ye-crypto, unokuqinisekisa ukuba uhlala kulo mdlalo ekuhambeni kwexesha. Kwelinye icala lesiphelo, ukusilela ukwenza oku kunokubangela ilahleko enkulu yemali.
Umngcipheko vs Umndilili womvuzo
Njengoko siphawulile ngokufutshane ngaphambili, yonke imiqondiso yethu yeTelegram ye-crypto iza nomngcipheko kunye nomvuzo. Kwakhona, eli lelona xabiso liphezulu esizimisele ukulubeka esichengeni sokuthengisa, kunye neenzuzo esijonge ukujolisa kuzo.
Kwiimeko ezininzi, sikhetha umngcipheko / umvuzo we-1: 3. Oku kuthetha ukuba sizimisele ukwenza i-3% kwinzuzo, kodwa kwangaxeshanye, iyakuvala indawo yethu ukuba iyasichasa nge-1%. Oku kuyakubonakaliswa kukuyeka-ukulahleka kunye namaxabiso ezithatha inzuzo eza neempawu zethu zeTelegram ye-crypto.
Nanku umzekelo wendlela i-1: umngcipheko we-3 womngcipheko / womvuzo ojongeka ngayo:
Umqondiso wethu wokuthengisa ucebisa ukubeka i-oda yokuthenga kwi-BTC / ETH kwi-38.50
I-1% yexabiso lethu lokungena eliphakanyisiweyo yi-0.38. Kananjalo, iodolo yethu yokuyeka ilahleko ibekwe kuma-38.12
I-3% yexabiso lethu lokungena eliphakanyisiweyo li-1.15. Kananjalo, iodolo yethu yokuthatha inzuzo ibekwe kwi-39.65.
Njengoku kungasentla, ayinamsebenzi ukuba kwenzeka ntoni nge-BTC / ETH amanyathelo ixabiso -Nye kuphela kwento ezimbini ezinokwenzeka. Ukuba isiginali yeTelegram ye-crypto ingqineke iyimpumelelo, iodolo yethu iya kuvalwa nge-3% yenzuzo xa isibini sibetha i-39.65. Kodwa, ukuba iimarike zihamba ngokuchasene nathi, sinciphisa ilahleko yethu kwi-1% xa isibini sibetha ama-38.12.
Ukuqhubela phambili ukusuka kwicandelo elingentla, i-3% yenzuzo kurhwebo olunokuthi luhlale ludlala kungabikho ngaphezulu kweeyure ezimbalwa lukhulu. Emva kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka ulinde iminyaka kunye neminyaka ukuze ufumane imali eninzi ngokufaka imali yakho kwiakhawunti yokonga yemveli!
Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba ungasokola ukwenza inzuzo eyaneleyo inyanga nenyanga ukuba imali yakho yokurhweba incinci. Umzekelo, masicinge ukuba ubeke emngciphekweni i- $ 500 kwenye yeempawu zethu ze-crypto ezibuyise inzuzo ye-3%. Oku kungakhokelela ekubuyiselweni kwemali encinci encinci ye- $ 15.
Kananjalo, uninzi lwamalungu esignali yoRhwebo lokuFunda 2 luya kusebenzisa amandla abo kwizikhundla zabo. Isixa semali onokuyifumana siya kuxhomekeka kumthengisi obhalisileyo kunye nelizwe lakho lokuhlala. Kungenxa yokuba izithintelo ezithile zikhona-ngakumbi eYurophu nase-Australia.
Nangona kunjalo, ukuba indawo yakho oyikhethileyo yokurhweba nge-crypto ikuvumela ukuba ufake isicelo, yithi 1:10 - oku kuthetha ukuba iinzuzo zakho zikhuliswa yinto eyi-10.
Zeziphi iiperi ze-Crypto ezikwenza iTywina leMpawu zethu?
Ukuhamba uye kwi-2021, ngoku kukho amawaka ezigidi zeedigital ezikhoyo. Ngokwezibini zorhwebo, ungaliphinda eli nani ngamanani aphindwe kabini.
Kungenxa yokuba imali nganye yedijithali inokuthengiswa ngokuchasene neemfumba zemali ezizimeleyo. Umzekelo, iBitcoin inokuthengiswa ngokuchasene neRipple, i-Ethereum, iBitcoin Cash, i-EOS, kunye namawakawaka. Iidijithali zemali zinokuthengiswa ngokuchasene nezezimali ze-fiat njengedola yaseMelika.
Apha kuFunda 2 ukuRhweba, imiqondiso yethu yeTelegram ye-crypto igubungela amasebe amabini ahlukeneyo esithuba-fiat-to-crypto kunye ne-crypto cross-pair.
Fiat ukuya Crypto: Njengoko igama libonisa, i-fiat kwiibini ze-crypto inemali enye yedijithali kunye nemali enye ye-fiat. Isibini esithengiswa kakhulu kolu hlobo yi-BTC / i-USD- eya kuthi ikubone uqikelela inqanaba lotshintshiselwano phakathi kweBitcoin nedola yaseMelika.
I-Crypto yomnqamlezo: Olu hlobo lwesibini lwe-crypto luza kuba neemali ezimbini ezikhuphisanayo. Umzekelo, i-BTC / i-ETH kunye ne-EOS / XRP zizibini ezinqamlezileyo ze-crypto.
Ekugqibeleni, iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlini linazo zonke izixhobo ezifunekayo zokuskena iimarike ze-cryptocur lwemali ngeenxa zonke. Oku kuthetha ukuba bahlala bekhangele amathuba okurhweba kwaye ke- imiqondiso yeTelegram ye-crypto oyifumanayo iya kwahluka kakhulu.
Ukusebenza kwiiMpawu zethu zeTelegram ze-Crypto
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka ngoku uqonde ngokuqinileyo ukuba funda njani imiqondiso ye-2 yeTrama yoRhwebo nge-crypto. Kuya kufuneka unazo nezixhobo zokuhambisa ngokufanelekileyo isicwangciso esichasene nomngcipheko- kubandakanya ulawulo lwebhanki kunye nokuqonda umngcipheko womvuzo.
Kananjalo, inqanaba elilandelayo lohambo lwesiginali yeTelegram kukufumana iqonga elifanelekileyo lokurhweba. Emva kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka usebenzise umrhwebi okwi-Intanethi ukuba unqwenela ukubeka ukungena kunye nokuphuma kweeodolo ezibonelelwa ngumqondiso.
Iindaba ezimnandi zezokuba kukho amakhulu ngamakhulu amaqonga orhwebo nge-crypto kwindawo ekwi-intanethi. Iindaba ezimbi kukuba kuphela linombolo ekhethiweyo ekufuneka uyiqwalasele.
Kula macandelo angezantsi sichaza ezona zinto ziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo ekukhetheni umrhwebi we-crypto. Ukuba awunalo ixesha lokuphanda iqonga ngokwakho, unokufunda isikhokelo sethu esibanzi kwezona zilungileyo Abarhwebi bemali yedijithali ka-2021 nangaphaya.
Ngaba iZiko lokuThengisa ngeCrypto lilawulwa?
Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba indawo yokuthengisa nge-cryptocurrency isafumana iinyawo zayo. Ngale nto, sithetha ukuba ixesha nexesha siphinda sive ingxelo yemithombo yeendaba ngokutshintshiselana okukhulu kwemali ye-imali yedatha. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabathengisi be-newbie bekhutshiwe lushishino, njengoko kuhlala kukho loo nkxalabo ingathandekiyo yokuba iqonga lokurhweba ekuthethwa ngalo liya kuba yingxaki.
Ngale nto engqondweni, singacebisa ukuba usebenzise kuphela i-cryptocurrency brokers ezimiselweyo. Oku kufuneka kuza ngohlobo lomzimba onelayisensi owaziwayo njengeCySEC okanye iCCA. Kuya kufuneka, nangona kunjalo, siqaphele ukuba ukuze uxhamle kule mibutho yolawulo, kuyakufuneka uthengise i-crypto CFDs.
Oku kuthetha nje ukuba unokwenza kwiimpawu zethu zeTelegram ze-crypto ngaphandle kokufuna ukuba ne-asethi engaphantsi. Ii-CFD ziluncedo ngenene ngenxa yezizathu ezininzi, njengoko zikuvumela ukuba uhambe ngokufutshane kwaye usebenzise amandla. Ukongeza, uninzi lwamaqonga e-crypto CFD esincomela ukuba akuvumele ukuba urhwebe ngendlela engenakukhomishini.
Zeziphi izibini ezixhaswa liQonga?
Njengoko besitshilo ngaphambilana, iqela lethu labathengisi abangaphakathi ezindlwini baya kuthumela imiqondiso yethu ye-crypto kwiindidi ezahlukeneyo. Emva koko, kuya kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi wakho omkhethileyo unika uluhlu olufanelekileyo lweentengiso zentengiso ye-cryptocurrency.
Ekugqibeleni, awufuni ukuvula iiakhawunti ngabanikezeli abaninzi abahlukeneyo, kuba oku kunokuba yinto enzima yokuhamba. Endaweni yoko, kungcono ukuba unamathele kwiqonga elinye, elilawulwayo elinika inani elibanzi kakhulu lezibini ze-crypto.
Zeziphi iikhomishini ezihlawulwa nguMrhwebi?
Bonke abathengisi beemali ze-imali kunye namaqonga orhwebo bakwishishini lokuvelisa inzuzo. Benza oku ngokubiza iifizi ezinxulumene nokuthengisa. Abanye baya kwenza imali xa ufaka okanye ukhupha imali, ecaleni kwezemali ubusuku bonke kunye nemirhumo yokungasebenzi.
Kodwa, eyona mirhumo ibalulekileyo ekufuneka uyijongile yikhomishini yorhwebo ehlawuliswe ngumrhwebi ecaleni kokusasazeka okuphakathi. Ixesha langaphambili lidla ngokuba yipesenti ephindaphindwe ngesibonda sakho.
Umzekelo, i-Coinbase ibiza i-1.5% kurhwebo ngalunye, olukhulu kakhulu. Ngapha koko, oku kuyakwenza ukuba i-Telegram ye-crypto isayinise imiqondiso, njengoko iinjongo zethu zenzuzo ziya kutyiwa lixabiso lekhomishini. Njengoko siqaphele umzuzwana nje odlulileyo, yiyo loo nto sihlala sicebisa ukuba singabarhwebi abangenazikhomishini.
Ukongeza koku, zonke izibini ze-crypto ziya kuza nokusasazeka. Lo ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga nelokuthengisa olibonayo kwiscreen. Umsantsa phakathi kwala maxabiso mabini yindlela umrhwebi ekubhekiswa kuye aqinisekisa ngayo ukuba inzuzo yenziwa nokuba kwenzeka ntoni na kwiimarike.
Kananjalo, ngaphezulu kwearhente engenasimahla, sijolise kumaqonga abonelela ngokusasazeka okuqinileyo. Oku kubaluleke ngakumbi xa ucinga ngobume beempawu zethu zeTelegram ye-crypto. Oko kukuthi, sihlala sikhetha ukujolisa kwenzuzo kwingingqi ye-3%, engenakulungela umrhwebi we-cryptocurrency obiza imali eninzi.
Ngaba iBroker iXhasa ukuRhweba ngeFowuni?
Kuya kufuneka siqaphele ukubaluleka kokukhetha i-cryptocurrency broker exhasa urhwebo ngeselula. Kwihlabathi elifanelekileyo, oku kuya kuza ngohlobo lwesoftware ehambelana nenkqubo yakho yokusebenza.
Ukubeka ngokulula, ngokufikelela kwi-app yokurhweba ephathekayo uya kuhlala ukwazi ukwenza imiqondiso yethu yeTelegram ye-crypto- kwakamsinya nje ukuba kusasazwe isaziso.
Emva kwayo yonke loo nto, kunokuza ixesha xa ufumana isiginali kodwa ukude kwisixhobo sakho. Ukuba kunjalo, umboneleli wakho wokuthengisa uza kukuvumela ukuba ubeke iiodolo ezifunekayo nokuba uhlala phi!
Iitrafikhi zasimahla zeSalathiso seCrypto
Ukuba ekuzingeleni imiqondiso yasimahla ye-crypto yeqela leTelegram, unokufuna ukunqumama. Cinga ngayo-umboneleli wesiginali uya kuskena iimarike zokurhweba ngemali ngeenxa zonke. Abazukuphela besebenzisa izixhobo zetshathi eziqhubela phambili kunye nezalathi zobuchwephesha, kodwa baya kuthi bazobe kwiminyaka yamava.
Ukuthathela ingqalelo oku, ngaba ucinga ukuba umboneleli wesiginali ye-crypto uya kuyenza yonke le nto ngaphandle kokucela nayiphi na imali? Mhlawumbi akunjalo. Ngapha koko, into esihlala siyifumana ngemiqondiso yasimahla yamaqela e-Telegraph kukuba baya kugubungela iindawo ezithile zesindululo sokurhweba.
Umzekelo, iqela leTelegram ye-crypto yasimahla inokukuxelela ukuba uhambe ixesha elide kwi-ETH / USD, kwaye wenze i-odolo yokulahleka kwe- $ 750.67. Nangona kunjalo, lo mqondiso awunantsingiselo, kuba awunakho ukufikelela kwixabiso lokungena elicetyiswayo, okanye indawo ekujongwa kuyo yenzuzo.
Sukwenza impazamo ngayo - ukuze ufumane ezi ziqwenga zedatha- kuyakufuneka uhlawule umrhumo!
Iimpawu zeCrypto kwiTelegram - Izicwangciso kunye namaxabiso
Ukuba uyasithanda isandi sento enikezelwa yiLearn 2 Trade Telegraph yenkonzo yeempawu ze-crypto kwiinjongo zakho zexesha elide zezezimali, ngoku siza kuxoxa ngexabiso elibaluleke kakhulu-amaxabiso.
Ukubeka ngokulula, eneneni sibonelela ngezicwangciso ezibini ezahlukeneyo ukuba uziqwalasele. Apha ngezantsi sichaza ukuba isicwangciso ngasinye somqondiso we-crypto sisebenza njani ngakumbi.
Iimpawu zasimahla zeCrypto ngeTelegram
Siyaqonda ukuba kuninzi ukuthandabuza kwibala lomqondiso we-crypto, yiyo loo nto sinika isicwangciso sasimahla kubo bonke. Ngamafutshane, oku akudingi lwazi lwezezimali kuwe. Endaweni yoko, kufuneka uvule iakhawunti kwaye ujoyine iqela lokufunda iTelegram yeQela lokuFunda.
Ngokwenza njalo, uya kufumana imiqondiso emi-3 ngeveki. Nangona oku kungonelanga ukuba ungafumana okuninzi kwinkonzo yethu yesiginali ye-crypto, oko kuyakuvumela ukuba usivavanye. Uya kubona iintlobo zorhwebo lwe-crypto esihlala silusebenzisa kwaye zeziphi iindlela zomngcipheko / zomvuzo ezikhethiweyo.
Ngokusesikweni, imiqondiso emi-3 yeveki oyifumanayo ngokusebenzisa i-Telegram usetyenziso olufanayo olufunyanwa ngamalungu ethu e-premium. Oko kukuthi, uyakufumana lonke ulwazi olufanayo- njengexabiso lokungena, ixabiso lokuyeka ukulahleka, kunye nexabiso lenzuzo.
Nangona kunjalo-kwaye njengoko sichaza kwicandelo elingezantsi, isicwangciso seprimiyamu siza kunye nendlela yemiqondiso imini yonke.
Iimpawu zeNkulumbuso ze-Crypto ngeTelegram
Ngokutyikitya inkonzo yethu yesiginali yeprimiyamu, ngokomndilili uza kufumana iingcebiso ezi-5 ngosuku ngeTelegram. Oku kuthetha ukuba uya kufumana isindululo ngasinye sokurhweba esasasazwa liqela lethu. Oku kuhlala kugubungela onke amaxesha, ngenxa yoko awuzukuphoswa nokuba leliphi na icandelo lehlabathi osekele kulo.
Njengoko igama lisitsho, iakhawunti yeprimiyamu iza nentlawulo. Ngale nto ithethwayo, siyakholelwa ukuba amaxabiso esiwabizayo-ngokunxulumene nenkonzo kunye neziphumo zembali ezifumanekayo, zibonelela ngexabiso elihle. Oku kunjalo ngakumbi xa ucinga i76% yokuphumelela kwinqanaba esele sizikhusele ukuza kuthi ga ngoku.
Nceda ufumane apha ngezantsi iiphakheji ezahlukeneyo esizibonelelayo kwipremiyamu yenkonzo yethu yesiginali ye-Telegraph crypto.
I- £ 35 ngenyanga-ihlawulwe ngenyanga
I-65 yeepawundi kwiinyanga ezintathu (i-21.66 ye- £ ngenyanga) -kuhlawulwa ngekota
£ 95 iinyanga ezintandathu (£ 15.83 ngenyanga) - ikhokhiswa ngonyaka
I- £ 250 yoFikelelo lwaBomi bonke
Ukuthathela ingqalelo oku kungentla, unokhetho oluninzi onokulufumana ukuba awuqinisekanga ngokuhlala nathi ekuhambeni kwexesha. Okokuqala, zonke izicwangciso zethu ziza nesiqinisekiso sokubuyisa imali kwiintsuku ezingama-30.
Oku kuthetha ukuba ungacela ukubuyiselwa imali ngokupheleleyo ukuba awonwabanga yinkonzo oyifumeneyo. Ambalwa kakhulu amalungu ethu awakhe athabatha ithuba loku, njengoko Funda ngama-2 amaxabiso okwaneliseka kurhwebo ngokwembali ahlala ephezulu.
Ukongeza kwisiqinisekiso sokubuyiselwa imali, kuya kufuneka uqaphele ukuba awuzange utshixelwe kwisicwangciso sakho osikhethileyo. Umzekelo, ukuba ukhetha ukuqengqeleka kwesicwangciso senyanga, elona xesha lide uzivalele kulo yinyanga enye.
Kwangokunjalo, ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa izicwangciso zethu ezinde kancinci- eziza nezinga eliphantsi lenyanga, elona xesha lide ovalelwe kulo ziinyanga ezi-3 okanye ezi-6.
Ujoyina njani iQela lethu loNxibelelwano lweSiginali ye-Crypto
Ukuba unomdla wokuqala ukwenza imali kwiimpawu zethu zeTelegram ye-crypto, ngoku siza kuchaza into ekufuneka uyenzile ukuze uqalise ngoku.
Inyathelo 1: Vula iAkhawunti yeBroker yoMthengisi
Izibuko lakho lokuqala lokufumana umnxeba kukufumana indawo yokurhweba nge-crypto efanelekileyo kwimiqondiso yethu. Oku kuthetha ukuba umrhwebi kufuneka alawulwe kwaye anikezele ngemirhumo yokhuphiswano.
Amanye amaqonga athandwa kakhulu malunga noku Skilling kunye neCapital.com. Zombini ezi brokers zibonelela ngokurhweba ngaphandle kwekhomishini kunye nenkxaso yeendlela zokuhlawula zemihla ngemihla ezinje nge-debit / amakhadi etyala kunye ne-e-wallets.
Inyathelo 2: Khetha isiCwangciso sokuFunda soMqondiso wezoRhwebo
Ukuqala ukufumana imiqondiso yethu yeTelegram ye-crypto ngexesha lokwenyani, kuya kufuneka kuqala uthathe isigqibo sokuba yeyiphi isicwangciso ofuna ukuqala ngaso. Njengoko sele kutshiwo apha ngasentla, olu lukhetho phakathi kwezicwangciso zethu zasimahla kunye neepremiyamu.
Inyathelo 3: Khuphela iTelegram kwaye Joyina
Emva kokukhetha isicwangciso onqwenela ukuqala ngaso, yimeko nje yokujoyina iqela lethu leTelegram. Ukuba awunayo i-app efakwe kwifowuni yakho, unokuyikhuphela kwiGoogle Play okanye kwiVenkile yeApp - simahla.
Nje ukuba ujoyine iqela lethu, ungalibali ukuqinisekisa ukuba usetyenziso lwakho lweTelegram lunezaziso zesandi ezitshintshiweyo. Ngokwenza njalo, awusoze uphinde uliphose ithuba lokurhweba kwakhona!
Isikhokelo seTekhnoloji yoMqondiso weCrypto Signal: Isigqibo?
Siyathemba ukuba ngokufunda esi sikhokelo ngokupheleleyo ngoku unokuqonda okupheleleyo kwezibonelelo ezininzi ezibonakaliswa ngumqondiso weTelegram ye-crypto.
Nokuba kukwazi ukurhweba ngeemali zedijithali ngendlela engacacanga okanye ukuthintela isidingo sokufunda uhlalutyo lobuchwephesha-imiqondiso ikuvumela ukuba ungene kwindawo yokurhweba nge-cryptocurrency ngokulula.
Konke okufuneka ukwenze kukujoyina iQela loThengiso loRhwebo lokuFunda 2 kunye nomthengisi ofanelekileyo ukubeka iingcebiso zethu!
Yintoni iqela leTelegram yomqondiso we-crypto?
Iimpawu ze-Crypto ziingcebiso zorhwebo ezikuxelela ukuba yeyiphi iodolo ekufuneka uyibeke- esekwe kuphando olunzulu lwentengiso. Ngokufumana le miqondiso ngeTelegram, isaziso siya kuvela ngokukhawuleza xa kuthunyelwa isiluleko!
Yenza malini inkonzo yokufunda uphawu lwe-2 yokufunda ye-crypto?
Ngaphandle kokuthetha ukuba imida yenzuzo iya kwahluka inyanga nenyanga. Ngale nto ithethwayo, ngokwembali sikhusele i-76% yokuphumelela. Oku kuthetha ukuba ukuthengisa okungu-76 kwikhulu ngalinye kunenzuzo.
Zeziphi iiperi ze-crypto ezijolise kuzo imiqondiso yakho?
Sijolise ikakhulu kwii-cryptocur lwemali ezinkulu ezinamaxabiso athelekiswa nedola yaseMelika. Kungenxa yokuba ezi ntengiso zixhamla kwelona nqanaba likhulu lokuthengiswa kwemali yexabiso. Ngale nto ithethwayo, senza amaxesha ngamaxesha ukufumana amathuba okurhweba ngezibini ezingaphantsi kolwabiwo lwemali.
Ziyingozi kangakanani imiqondiso yakho ye-Telegraph crypto?
Nokuba uyayisebenzisa okanye awuyisebenzisi inkonzo yesiginali yeTelegram, lonke urhwebo luphethe umngcipheko. Ngale nto ithethwayo, asinakuze sibeke umngcipheko ngaphezulu kwe-1% kurhwebo olunye, ukuqinisekisa ukuba umile elona thuba lihle lokukhusela i-bankroll yakho ekuhambeni kwexesha.
Ngaba unikela ngesilingo sasimahla?
Sinikezela abathengi abatsha isiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30 kuko konke ukuthengwa kwesicwangciso seprimiyamu - akukho mibuzo ibuziweyo. Ukongeza koku, sikwanikezela ngenkonzo yasimahla yesiginali ye-crypto eza neziphakamiso ezi-3 ngeveki.